Isitudiyo saseMountView edolobheni: Okusha nokunethezeka! - I-Airbnb
Isitudiyo saseMountView edolobheni: Okusha nokunethezeka!
Port Louis, i-Mauritius
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Hamant
Itholakala ekungeneni kwenhloko-dolobha yase-Mauritius, ifulethi lilungele zonke izihambi. Iphinde inikeze ukufinyelela okulula ezindaweni zokuvakasha ezizungeze i-Mauritius. Sinesistimu ye-intanethi engcono kakhulu ye-Wifi esakhiweni sonke. Inethiwekhi yayo yohlelo lwe-American Eero. Kungakapheli imizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo ukuya esiteshini sebhasi, esitolo kanye nesitolo esikhulu. Lokhu kuphela konke endaweni eyodwa. Ukubukeka kwentaba, Ukubukeka kolwandle n Ukubukeka kwedolobha. Asinawo ama-lift, kodwa ukubuka indawo yonke kuzokwenza ukhohlwe ukuphakamisa !!!
Kungani uhlale endlini endala lapho ungajabulela ubumfihlo besitudiyo esisha sha kanokusho?
Ifulethi linelanga, livulekile futhi lifudumele. Uzoba nawe sonke isikhala. Ukwakhiwa kwaso sonke isakhiwo esinamafulethi kwaqedwa ngo-2017. Iziqongo zekhawunta yekhishi emisha sha, amathayela e-granite, ivulandi, i-cabinetry yangokwezifiso, isiqandisi esisha, i-air conditioner, i-Jacuzzi, namafasitela amakhulu. Usuka efulethini, ungajabulela umoya opholile ovela ezintabeni futhi ubuke ilanga lishona olwandle ngasechwebeni. Indawo okuwukuphela kwayo edolobheni enokubukwa kolwandle nokubukwa kwentaba!!
Ikhishi lethu lifakwe umpheki wegesi kanye nompheki omncane kagesi njengesipele uma kwenzeka siphelelwa igesi. Kukhona iketela, i-ricer cooker, i-toaster, ne-microwave. Siphinde sibe nezinto eziyisisekelo, amapuleti, i-casserole, izingilazi ze-whisky n zewayini nezinkomishi.
4.74 · 47 okushiwo abanye
Njengoba sisemnyango wedolobha, siseduze nayo yonke into, izitolo, isitolo esikhulu, ikhemisi, isibhedlela, inxusa laseMelika kanye nenxusa laseFrance. Indawo yokudlela enikezela ngokudla kwasendaweni futhi ithenga esitezi esingezansi.
Ngihlala ngitholakala kubavakashi bami. Ngenza konke okusemandleni ami ukubasiza nokubaqondisa ngesikhathi sokuhlala kwabo. Noma nini lapho bekhululekile, ngiyabaxosha. Ngiwucingo nje olukude nawe. Siphinde siqinisekise izivakashi zethu ukuthi asithathi 1 cent ikhomishana ezinsizeni zamatekisi nokubuka indawo!!
Uma usubhukhe nathi , sizokweluleka ngokokwazi kwethu kanye nangokwethembeka.
Ngihlala ngitholakala kubavakashi bami. Ngenza konke okusemandleni ami ukubasiza nokubaqondisa ngesikhathi sokuhlala kwabo. Noma nini lapho bekhululekile, ngiyabaxosha. Ngiwucingo…
Hlola ezinye izinketho ezise- Port Louis namaphethelo